Akpọrọ ihe: Na-echedobe gị site na ntanetị 6 ndị a
Ndị omekome Cyber ​​emetụtawo ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke azụmahịa na ndị mmadụ n'otu afọ na-adịbeghị anya. Ebe nrụọrụ weebụ na ọrụ ntanetị na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịkwụ ụgwọ, zụrụ ihe ndị anyị kacha amasị, debe ụlọ ọrụ ma rụọ ọrụ dị iche iche. N'otu oge ahụ, ndị na-agba ọsọ na-enweta gị n'ọnyà, ma ị gaghị enwe echiche nke ihe na-aga n'ihu - en ucuz weider protein tozu. Egwuregwu na mbuso agha dị iche iche dị iche iche site na ndị na-ere ahịa omenala gaa na ngwanrọ ọjọọ na ngwa ngwa. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ejidekwa nchịkwa phishing na-esi na mpaghara ụwa amaghị.
Oliver King, Onye Nlekọta Ọrụ Nlekọta nke Ọkachamara , na - akọwapụta nchịkọta weebụ 6 dịka ihe ize ndụ taa.
1. Agba chaa chaa
Scammer na ndị omempụ na-esikarị na United States na Canada. Ha na-eji ozi ịntanetị ma ọ bụ igwe iji kụzie ndị na-azụ ahịa ịzụta batrị dị elu. Ha na-eme ka ị ga - emeri ihe pụrụ iche site na batrị ndị a. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ nwere ọnyà ma jiri ọtụtụ puku dollar na atụmatụ ndị a. Federal Trade Commission (FTC) na-ekwu na ihe ka ọtụtụ n'ime mkpọsa mgbasa ozi ga-abụ telifon.
2. Nje virus efu (nke na-aghọ ezigbo onye)
Ọ bụ eziokwu na ngwaahịa na akụrụngwa na-emepụta virus na malware. Ọ bụrụ na ị hụ na usoro kọmputa gị adịghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ na-emechi ya, enwere ohere ọ nwere nje. Ikwesiri itinye software antivirus ngwa ngwa o kwere omume. Otú ọ dị, ụfọdụ 'nje virus' nwere ike ịwakpo usoro kọmputa gị. Ha na-ebelata ngwa ngwa nke ngwaọrụ gị, a manyere gị ịwụnye otu ngwanrọ. N'ihi ya, nje ọjọọ ndị ahụ na-aghọ ezigbo mmadụ ma zuo ozi gị dị nro. Nanị ihe ngwọta maka nsogbu a bụ na ị adịghị etinye software ị na-enweghị obi ike..
3. Ezi ebumnuche agabigawo
Mgbe ụfọdụ, ndị scammers na-eme ka hà bụ ndị nnọchianya nke ndị ọrụ ebere. Ha choro ka ị nyere ndị ọdachi dakwasịrị aka, ọgụ ma ọ bụ ntiwapụ. Ọtụtụ mgbe, ndị omempụ na-esi ọnyà ndị na-egosi mmasi iji dozie esemokwu mpaghara. Ya mere, ezi ebumnuche gị ga-aga na-ezighi ezi ka ị na-emefu nnukwu ego ma ghara inwe ihe ọ bụla.
4. Nchedo agha
Ọ bụrụ na onye ozi ị na-ekwu na ị mebie iwu na ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ, ị ga-echegbula ya. Otu ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ihe nkiri Hollywood na-akọwa otú ndị mmadụ si ejide onwe ha site na ndị omempụ na-eme ka hà bụ ndị uweojii ma ọ bụ ndị nche. Ọ dịghị onye ọrụ na-eziga ozi-e onye ọ bụla. Kama nke ahụ, ha na-eduzi nnyocha ha n'ọtụtụ buru ibu na-abịakwute gị ozugbo. I kwesịghị iziga onye na-eme ka ọ bụ onye nlekọta nche. Ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị ọbụlagodi na ọ na - ekwu na ị bụ onye a na - ahụ maka nchekwa nsogbu.
5. Ọrụ ọhụrụ
Ngbanwe nke ịghọ aghụghọ n'Ịntanet na-enye ọrụ na tiketi maka ndị nọ ná mkpa na ndị ogbenye. Ịbụ njedebe bụ otu n'ime nkọcha kachasị njọ maka onye gụsịrị akwụkwọ, ma nke ahụ apụtaghị na ị na-ezigara onye ị na-amaghị maka ego gị. Ụfọdụ ndị ọkachamara na-ajụ gị ka ị debanye aha ha na ebe nrụọrụ weebụ ha ma nyefee CV gị. Ọ dị mma ịga n'ihu na zipu CV gị, mana ị gaghị akwụ ụgwọ ha ọ bụla ka ọ bụrụ na ụlọ ọrụ a ma ama jụrụ ndị ọrụ ya ịkwụ ụgwọ n'ihu. Ọ bụrụ na a gwara gị ka ị kwụọ ụgwọ tupu ị kwụọ ụgwọ, enwere ike ịnweta ego gị.
6. Enyi na enyi nwanyị
Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ na-edeba aha na ebe nrụọrụ weebụ na-enwe kwa ụbọchị. Ha ch or o ka ha nwee ezigbo enyi ma ob ur u na ha ch or o ka ha l u. Na nke ọ bụla n'ime ụzọ, ụlọ ọrụ ịntanetị n'ịntanetị adịghị mma ịga. Ndị na-emepụta ihe nkiri na ndị omempụ na-ejikarị weebụsaịtị ndị a eme ihe. Ha buru ndi enyi gi, buru dika nwanyi mara mma ma mara mma. Mgbe ahụ ha ga-elekwasị anya bụ ka gị na gị nwee mmekọrịta ma rịọ ụfọdụ ego. Ọ bụrụ na onye ọ bụla ekwu na ya nọ ná nsogbu, ị nwere ike inyere ya aka, ma ọ gaghị eziga ego ọ bụla na akaụntụ ego ha.